Tababar & Shahaadada
Dhamaan Koorsooyinka Shahaadooyinka iyo Tababarka
Open source Technology waa mid ka mid ah tiknoolajiyada ugu ballaaran ee loo isticmaalo adduunka maanta iyo Redhat waxay ku adkaataa jawi ku saleysan server-ku. Redhat Waxay bixisaa noocyo kala duwan, tababarka iyo shahaadada koritaanka shakhsi ahaaneed. Shaqooyinka lagu daboolay Nidaamka Koofiyadaha Cas.
Ka shaqaynta sheyga Microsoft waa mid muhiim u ah bixinta ama isdhexgalka mashruuca, markaa aniga waxaan ka heleynaa ITS si aan kuugu caawinno tababarka waxaanu kaa dhigi doonaa mid aad ufiican si loo isticmaalo tignoolajiyada Microsoft & noqda xirfadle Microsoft oo xirfad yaqaan ah. Si aad u fahamto kaalinta AD RMS.
The ITIL Mashruuca Tiknoolajiyada Macluumaadka Tiknoolajiga (Data Library Infrastructure Library) waxaa loogu talagalay qaabeynta xulashada, qorsheynta, bixinta iyo taageeridda adeegyada IT si ganacsi. Hadafku waa in la wanaajiyo tayada iyo helitaanka heerarka adeegga la saadaalin karo.
Hogaamiye ku jira waxbarashada ammaanka internetka ITS offers accredited online cyber security degrees for advancing IT security careers.EC-Council is a global leader in InfoSec Cyber Security certification programs like CEH. India’s Leading Professional EC-Council.
khayraadka Human is used to describe both the people who work for a company or organization & the department responsible for managing related to employees.It is designed to maximize employee performance in service of an employer’s strategic objectives.
DevOps macnaheedu waa, qof fahmaya hawlaha & ka shaqeynaya horumarka, laakiin marka la eego horumarinta shaqooyinka, wuxuu qabaa ururka "Barnaamijka" nidaamka casriga ah. Fursadaha shaqo ee DevOps way sii kordhayaan.
Baro habdhaqanka ugu fiican ee ammaanka, taageeraya barnaamijyada amniga IT-ga iyo nidaamka NIST qaab, ama aad kasbato Piskudhacyada, Kumbuyuutarrada, Barnaamijyada, CISSP, CompTIA Security +, CASP, IDH iyo kuwo kale!
CISCO waa hoggaamiyaha adduunka ee aaladaha & qalabaynta qalabka. CISCO waxay bixisaa wadashaqeyn dhameystiran oo ay la socoto shahaadooyinkeeda sida CCNA, CCNP & CCIE .Waxay bixisaa tiknoolajiyada ugu dambeysa ee farsamada.
marketing Digital waa qayb ka mid ah suuq-geynta suuq-geynta oo isticmaalaya teknoolojiyada digital-ka ah si loogu iibiyo oo loo iibiyo alaab. It wuxuu ku fidaa shabakadda internetka marketing in lagu daro jidka aan u baahnayn isticmaalka internetka.
Maamulka mashruuca waa anshaxa billowda, qorsheynta, fulinta, xakamaynta, iyo xiritaanka shaqada kooxda si loo gaaro ujeedooyin gaar ah iyo in la buuxiyo shuruudaha guusha gaar ah waqtiga la cayimay.
imtixaanka farsamooyinka waxaa ka mid ah hannaanka fulinta barnaamij ama codsi ujeedada helitaanka software cilladaha (khaladaadka ama cilladaha kale), iyo xaqiijinta in software sheyga wuxuu ku haboon yahay isticmaalka.
Maaraynta hannaanka waa qayb muhiim u ah nidaamka casriga ah ee casriga ah (OS). Mashruucan waa in loo qoondeeyo kheyraadka hababka, awood hababka in ay wadaagaan oo is dhaafsadaan macluumaadka, ilaaliyaan ilaha dhaqaale kasta geedi socodka kuwa kale hababka.
Waxaad raadsataa Tababaro fara badan oo aad u baahan tahay: F5 GTM, Primavera P6, Integration Data. Baro xirfadaha cusub, u diyaari shahaadada interneedka iyo sidoo kale bixiyaan tababar wicitaan si aad uga caawiso horumarinta, xirfadlayaasha IT.